China Lapel Pin ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Sesineminyaka engaphezu kwengu-10 sigijima. Ngaleso sikhathi sakhe ulwazi lokuncoma indebe noma indondo efanele yanoma yisiphi isenzakalo. Ngezinsizakalo zokuqopha zasendlini, izindebe zanoma yisiphi isabelomali kanye neqembu elinobungane, lomndeni, sishayele ukuze uthole zonke izindondo zakho nezidingo zendondo.
Umkhiqizo:Indondo Yensimbi Yezemidlalo Yangokwezifiso
Usayizi:1.5″, 1.75″, 2″, 2.25″, 2.5″, 3″,4”,5”. futhi njengesicelo sakho
Ubukhulu: 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm
Material: Ithusi, Ithusi, ingxubevange yeZinc, Iron, Aluminium, njll.
Inqubo: I-Die Struck / Die Casting/Printing
Okwedlule: I-PVC Keychain